आफूलाई लम्पसारवादीको आरोप लगाएको मा दुखेसो पोख्दै : प्रचण्ड
चितवन, २८ असार। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रकोपविरुद्धको सङ्घर्ष एक जुट भएर गर्नुपर्ने बताएका छन् । चितवनमा आयोजित पार्टी कार्यक्रममा दाहालले पार्टीभित्र कसैलाई राष्ट्रघाती दलाल र कसैलाई महान् राष्ट्रवादी करार गर्न खोजिएकामा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
दाहालले पार्टीलाई एकतावद्ध राख्नु नै सबैको कर्तव्य हो भन्दै ‘यहाँ कोही राष्ट्रघाती दलाल, कोही महान् राष्ट्रवादी भन्ने होइन। हामी सबै मिलेरै नाकाबन्दीको सामना गरेको हो । हामी सबै मिलेरै नक्शा बनाएको हो । के को राष्ट्रवाद जिन्दावाद र मूर्दावादको कुरा ? पार्टीभित्र जिन्दावाद र मूर्दावाद भन्ने कुरा कसरी ?’ भन्दै आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका छन्।
उनले पार्टी गतिविधिलाई कमजोर पार्ने गतिविधिले देश र जनता कसैलाई हित नगर्ने पनि बताए । पार्टी एकताको पक्षमा उठेका विषयमा भइरहेको पहललाई सकारात्मक रुपमा लिँदै उनले भने, ‘यसमा पनि तपाईंहरुको पहल भइरहेको छ । त्यसका लागि धन्यवाद ।’ आगामी दिनमा अझै दृढताका साथ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ।
दाहालले अहिलेको आपतकालीन समयमा सबैले सतर्कता अपनाउन र उच्च मनोबलका साथ एकताबद्ध भएर कोभिड–१९ का विरुद्ध लड्न सुझाब दिए। रोगविरुद्ध सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज, पत्रकार सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले बताए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रकोपविरुद्धको सङ्घर्ष एक जुट भएर गर्नुपर्ने बताएका छन् । दाहालले सरकारले लिएका राम्रा अडान, निर्णय र काममा पार्टीको सिंगो पंक्तिको साथ रहेको र पार्टी बैठकबाटै धन्यवाद दिइएको प्रष्ट पार्दै पार्टीलाई कुनै हालतमा फुट्न नदिने प्रतीज्ञा गरे।
दाहालले नक्शाको बिषयलाई लिएर नया नक्शा जारी गर्न आफूले नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई निर्देशन दिएको समेत दाबी गरेका छन्। उनले भने: नेपालको नयाँ नक्शा जारी गरेपछि आफूलाई भारतले हटाउन खोजेको र त्यसमा पार्टीकै नेताहरुको मिलिभगत रहेको आरोप प्रधानमन्त्री ओलीले लगाइरहे तर भारतले नया नक्शा जारि गर्यो, अब हामी पनि तुरुन्तै नया नक्शा जारी गर्नु पर्छ भनेर मैले नै प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको हुँ।
भारतले नया नक्शा प्रकाशित गरेपछि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्शा तत्काल नेपालले प्रकाशित गर्नुपर्छ भनेर पार्टी स्थायी कमिटीबाट सर्वसम्मत निर्णय गराएको दलील पेश गर्दै उनले के त्यो पनि लम्पसारवाद हो ? भन्दै ओलीलाई प्रश्न गरे ।
माधव नेपालसमूहसँग मिलेर ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पदबाट हटाउन कस्सिएका दाहाल पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीसँग संवादमा रहेपनि कुनै समाधान निस्केको छैन ।यस्तोमा चितवन ओर्लिएका दाहालले आइतबार कार्यकर्ता माझमा भँडास पोख्दै भने, ‘केन्द्रीय समितिले अविलम्ब नक्शा प्रकाशित गर भनेर सरकारलाई निर्देशन दियो, के यो लम्पसारवाद हो ?’
यसरि आफूलाई लम्पसारवादीको आरोप लगाएकामा निकै चित्त दुखाएका दाहालले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग ट्रेड एण्ड ट्रान्जिट सम्झौता गरेको र आफू प्रधानमन्त्री हुँदा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरलाई) सम्झौता गरिएको प्रष्टीकरण दिँदै भने के यो लम्पसारवाद थियो ?
दाहालले काठमाडौं निजगढ द्रूत मार्ग बनाउन नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय, मधेशी दललाई समेटेर निर्वाचन सफल पार्ने कार्य, लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने जस्ता निर्णय पनि लम्पसारवाद नै थियो त ? भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रश्न गरे ।